Iziguli zibuyiselwa emuva njengoba abahlengikazi benqaba ukusebenza emtholampilo | Scrolla Izindaba
Iziguli zibuyiselwa emuva njengoba abahlengikazi benqaba ukusebenza emtholampilo
Iningi leziguli emuva emtholampilo iMax Madlingosi elokishini KwaZakhele e-Port Elizabeth ngoba abahlengikazi benqaba ukwenza imisebenzi yabo.
Abahlengikazi bebelokhu bebhikisha kusukela ngoMsombuluko ngemuva kokuba uhlangothi olulodwa lwesango elikhulu lususwe ngabantu abacekela phansi impahla ngoLwesine olwedlule.
Abahlengikazi bakhalaze eMnyangweni wezeMpilo bethi abazizwa bephephile emsebenzini.
UGogo uNomakula Gqola (oneminyaka engama-64) wase-Seyisi ufike eMtholampilo ngoLwesine ekuseni ezofuna usizo, kodwa wamjikisa unogada.
UGogo utshele abakwa-Scrolla. Afrika ukuthi uthe kunogada, “Ooh ndodana yami ngicela ungisize. Ngiyagula kakhulu. Ngivela endawenj kaDkt Mqela manje ngoba angilalanga izolo ebusuku. Ngidinga i-oksijini ngoba ngiphelelwa umoya futhi ngikhwehlela kakhulu. Izinga lokushisa komzimba wami liphezulu futhi umhlane wami ubuhlungu.
“Udokotela uthe angize lapha ukuzothola i-oksijini. Kodwa manje ngitshelwa ukuthi umtholampilo uvaliwe. Angazi ukuthi ngenzeni,” esho ekhala.
UNceba Magoxo, usihlalo wekomidi lomtholampilo uthe, “NgoLwesine olwedlule ekuseni sithole uhlangothi olulodwa lwesango lomtholampilo lususiwe lwabekwa phansi kulokho okwakubukeka njengokugqekeza. Abahlengikazi abangama-20 babika lolu daba kumphathi wendawo owathumela umuntu ukuba eze ezolungisa ngoLwesihlanu. Kodwa umsebenzi uthe, isango belingalungiseki futhi kuzodinga elisha.
“Umphathi wendawo wayalela abahlengikazi ukuthi babuyele emsebenzini kodwa benqaba, bethi abazizwa bephephile.”
“Abahlengikazi bathe izimoto nezimpilo zabo zisengcupheni. Ezinyangeni eziyisithupha cishe amamitha amahlanu ocingo abebiwe ngemuva komtholampilo awakalungiswa yize kwabikwa eMnyangweni.
“Njengesixazululo sesikhashana abahlengikazi bacele abanye onogada ababili ngoba munye kuphela unogada esangweni lomtholampilo wabo. Kodwa uMnyango wenqabile ukuletha onogada. NgoLwesibili abahlengikazi banqume ukuyosebenza kweminye imitholampilo,” kusho uNceba.
Isenzo sabahlengikazi sicasule iziguli.
“NgoLwesithathu iziguli ezibalelwa ema-20 bezithukuthele ziholwa ngelinye lamalungu omphakathi nezihlala eduzane nomtholampilo zilahle udoti namathayi esangweni. Ziphinde zasabisa abahlengikazi ngokuthi ababasize noma baphume emtholampilo,” kusho uMagoxo.
Okhulumela uMnyango wezeMpilo esifundazweni, uSizwe Kupelo uthe, kuyishwa ukuthi abahlengikazi bazovele balahle iziguli bengawunikanga umnyango ithuba lokuthi ulungise isango.
“Ubugebengu busongela kakhulu izinsizakalo zezempilo e-Metro, izigebengu